Sandals Foundation: Unofarira Anotungamira Ekufamba Nheyo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kutarisirwa » Sandals Foundation: Unofarira Anotungamira Ekufamba Nheyo
Antigua & Barbuda Kuvhuna Nhau • Bharabhasi Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • tsika nemagariro • dzidzo • Grenada Kupwanya Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Investments • Jamaica Kupwanya Nhau • Nhau Dzakanaka • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • Resorts • Kutarisirwa • Mutsvene Lucia Breaking News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Turks neCaicos Kupwanya Nhau • Akasiyana Nhau
Basa rakatanhamara reiyo Sandals Foundation kukudziridza nharaunda dzeCaribbean uye kukurudzira tariro muhupenyu hwevanhu venharaunda iyi kwakazivikanwa zvakare sezvo yakatumidzwa zita rekuti "Favorite Responsible / Philanthropic Travel Foundation" kumukurumbira weAgents 'Choice Awards kwegore rechipiri rakatwasuka. Chiziviso ichi chakaitwa pachiitiko chinotarisirwa kwazvo cheCanada indasitiri yekufambisa yakaitwa musi waGumiguru 1, 2020.
Sandals Foundation yakavambwa mu2009 neMutevedzeri Wasachigaro weSandals Resorts International, Adam Stewart, kuwedzera basa rerupo iro raive riri musimboti weiyo yakasarudzika-inosanganisira resort cheni kubva kuvhura magonhi ayo makore 39 apfuura.
“Makungwa eCaribbean, uye vanhu vacho imhuri. Takazvipira kudzorera mari mumba medu nekupa mikana inobatsira vanhu vemunharaunda medu kuti vatende uye vagadzire ramangwana rakanaka ivo nezvizvarwa zvinotevera, ”akadaro Adam Stewart, Mutevedzeri Wachigaro weSandals Resorts International.
Iwo maAgents 'Sarudzo Mipiro akagadzwa mu1999 neToronto-yakavakirwa Baxter Media uye ayo epamberi zvinyorwa, Canada Travel Press uye Travel Courier. Ongororo yegore negore ndiyo yakatanhamara sampuli yeCanada yekufambisa vamiririri vanosarudza avo vavanofarira vanopa zvekufambisa muzvikamu zvakasiyana. Gore rino, kunyangwe panguva ye COVID-19 denda, padyo ne6,000 nyanzvi dzekuCanada dzekufambisa dzakavhota mumapoka makumi matatu nemasere.
Stewart, anova zvakare Mutungamiriri weSandals Foundation, akasimbisa: Ivo mubatsiri akakosha anoita kuti basa redu riite. Pamwe chete nenhengo dzechikwata chedu, vaenzi, uye vatinoshanda navo takanyora zvakanaka muhupenyu hwevanhu vanopfuura mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nemazana mapfumbamwe. ”
Mu2019, iyo Sandals Foundation yakagamuchirwa neDhipatimendi reGlobal Kutaurirana kweUnited Nations seimwe yemasangano ane nhamburiko dziri kubatsira zvakanyanya mukuita iyo Agenda ye Sustainable Development uye iyo Sustainable Development Goals (SDGs).
Kunyangwe dunhu parakasangana nekusanzwisisika nekuda kwekukanganiswa nedenda reCOVID-19, iyo Foundation yakaramba iri bhakoni, ichipa ruyamuro nerutsigiro kumhuri nemasocial services.
VaHeidi Clarke, Executive Director kuSandals Foundation, vakati rubatsiro rwakanyoreswa rucharamba ruchiita basa raro rekuona kuti zviwi zvisere zvavanoshanda zviri munzira yeramangwana.
“Sesangano renharaunda, ibasa redu kuisa mari mukusimudzira kweCaribbean. Ticharamba tichisimbisa nharaunda, kuisa mari mukuverenga nekudzidzisa, kutsigira raramo, kubatsira vechidiki, kubatsira avo vanoshaya, kusimbisa hutano, nekuchengetedza nharaunda kuburikidza nezvirongwa zvinoshandura hupenyu zvinopa hupenyu, ”akadaro Clarke.
Iyo Sandals Foundation inoshanda muJamaica, St. Lucia, Grenada, Antigua, Barbados, Turks neCaicos, uye maBahamas anoshanda munzvimbo dzedzidzo, nharaunda, uye nharaunda.